Happy Birth day wishes for Mom in nepali – get your ex love
Nepali Festival wishes
Shayari in nepali
Happy Birth day wishes for Mom in nepali
Hello Nepali visitors we are providing youabest birthday wishes for mom (mother) in Your own nepali writing/fonts.Each and every living being love their mom mother its common he/she want to celebrate birthday for his mom(Mother). This is the 21st century so every people is using social media and also their mom using social media. so They need some birthday wishes for mom Mother to post or sent sms for their mom. Lets see below:-
आमा, म तिमीलाई बताउन सक्दिन कि तपाई मेरो जीवनमा कस्तो आशिष् दिनुहुन्छ। तपाईं मेरो धेरै माथि र तल मार्फत मेरो लागि त्यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईंले मलाई हाम्रो परिवारको सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व हुन उत्प्रेरित र उत्प्रेरित गर्नुभएको छ। जन्मदिन मुबारक मेरो भूमिका मोडेल!
यहाँ छ, आमा! तपाईंको ज्योति ज्योतिको चमक गर्न जारी रहन्छ जस्तै यो सधैं, यो दिन र सँधै। जन्मदिनको शुभकामना!
संसारको सबैभन्दा विशेष आमाको लागि, म तिमीलाई जन्मदिनको सबैभन्दा शुभकामना चाहन्छु! तपाईं मेरो गहिरो दिनहरूमा हल्का हुनुहुन्छ। मेरो लागि सधैं यहाँको लागि धन्यबाद।
यहाँ छ, सुपर आमा! तपाईं सबैभन्दा बलियो, बहादुर, सबैभन्दा बुद्धिमान महिला हुनुहुन्छ। जन्मदिन मुबारक हो, मेरो नायक!
हरियो रातो हुन्छ। बैजनी नीलो छन्। त्यहाँ कुनै पनि होइन म तपाई भन्दा तपाईलाई मुसीबतमा बदल्नेछु। जन्मदिनको शुभकामनालाई सम्पूर्ण संसारमा सबैभन्दा राम्रो आमाको लागि! तपाईं मेरो धेरै सुपर आमा हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, यो सत्य हो! जन्मदिनको शुभकामना!
म क्षमा हुँदा म तपाईंको विशेष दिन बिर्सिएको छु बिदाई जन्मदिन तपाईंको आमाको लागि इच्छा छ
हङकङ र तपाईलाई चुम्बन, मीठो आमा। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। जन्मदिनको शुभकामना!
जन्मदिन मुबारक हो, आमा! यो वर्षको त्यो समय फेरि एक पटक हो – तपाईंको विशेष दिन मनाउनुको समय हो। तपाईं एक शानदार पार्टीको योग्य हुनुहुन्छ भन्दा बढी हुनुहुन्छ। यसलाई गरौं!
जन्मदिन मेरो जन्मदिनको शुभकामना! मेरो जीवन सधैँ दिनको म्याद परिवर्तन भयो। तपाइँ अघि, मलाई साँचो प्रेम र समर्पणले आमालाई हुन सकेन। अब, तिम्रो साथ, म यो सबै छ। यहाँ तपाईं मज्जा दिन चाहनु भएको छ!
जन्मदिनको शुभकामना मेरो सबैभन्दा राम्रो मित्र, मेरी आमा! मलाई थाहा छैन कि तपाईंको बच्चा बन्नको लागी मलाई कसरी भाग्यशाली छ, तर यो केहि चीज छ जुन म हरेक दिन को लागि ईश्वरको धन्यवाद दिन्छु। जबसम्म मैले तपाईंलाई चाहिन्छ, तपाई सधैँ वरपरमा हुनुहुन्छ
जन्मदिन मुबारक हो, आमा! मेरो सँगै मेरो जन्मदिन मनाउने धेरै सम्झनाहरू छन्। म अब अविश्वसनीय रूपमा तपाईंको लागि उत्सवको आयोजना गर्न सम्मानित छु। तपाईंले यो कमाउनु भएको छ!
हाम्रा वर्षहरू बढ्दै जानिहाल्दै, एक कुरा निरन्तर छ। त्यो हामी सबैको लागि प्रेम र आदर हो। तपाईंले हाम्रो परिवारलाई सँगै बनाउनु भयो। हामी तपाईंलाई सबै हृदयले माया गर्छौं। जन्मदिन मुबारक हो, प्रिय आमा! प्रेम, तिम्रो छोराछोरी।
तपाईं मेरो जीवनमा, मलाई थाहा छैन आज म कहाँ हुनेछु। तपाईंले मलाई सबै महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिकाउनुभयो: कडा परिश्रम, अरूलाई सम्मान, कहिल्यै छोडेर, र कुनै कुरा के हो मजा गर्न। म म तपाईंको कारण हुँ। यो तपाईंको जन्मदिनमा, मैले तपाईले गरेको सबैको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जन्मदिन मुबारक हो, आमा!
जन्मदिनको शुभकामनाको वरिपरि उत्तम आमा! मैले मलाई बिरामी हुँदा मलाई कडा खेलिरहँदा मलाई खुशी लाग्यो, र मलाई मेरो सबै भन्दा कठिन प्रयास गर्न को लागी प्रोत्साहन दिईयो। मलाई कसरी बलियो महिला, समर्पित आमा र मायालु पति हुन सिकाउनको लागि धन्यवाद। आजको दिनको मज्जा लिनुहोस्।
Happy birthday wishes for father in nepali language
Happy birthday wishes to sister in nepali fonts
Happy Birthday wishes for brother in nepali
Happy Birthday Wishes for friends in nepali
Nepali Festival wishes, sms, messages
wishes quotes status shayari gajal in nepali
get-your-ex-love.com All rights reserved.